Xirfadaha - Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie
Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie Waa Meel Fiican oo Lagu Shaqeeyo
Waan ku qanacsanahay xiisahaaga xubin shaqaale mustaqbalka ah. Haddii aad raadineyso inaad kaqeybqaadato tabaruce ahaan ama saaxiibkiis, booqo Pro Bono / Volunteers ama Fellowships.
Prairie State Legal Services waa urur adeegyo sharci oo firfircoon oo aad loo ixtiraamo. La aasaasay 1977, Prairie State waxay leedahay taariikh sharaf leh oo ah bixinta adeegyo sharci oo tayo sare leh macaamiisha danyarta ah. Waxaan u adeegnaa soddon iyo lix degmo oo ku yaal waqooyiga iyo bartamaha Illinois. Si loo hubiyo inaan heli karno oo aqoon u lahayn bulshooyinka aan u adeegno, waxaan ka hawlgalnaa 11 xafiis, oo ku yaal Bloomington, Galesburg, Joliet, Kankakee, McHenry (Woodstock), Ottawa, Peoria, Rockford, Rock Island, Waukegan, iyo Galbeedka Suburban. .
Waxaad fursad u heli doontaa inaad isbedel sameyso.
Waxaa jira jagooyin kala duwan, laakiin dhammaan u doodayaasheena waxay filan karaan inay ku lug yeeshaan howlaha soo socda:
Samaynta wareysiyo qaadashada macaamiisha, kaqeybgalka shirarka aqbalaada iyo kaqeybgalka qorsheynta kiisaska.
Bixinta la-talin sharci, adeegyo kooban ama wakiil dheeri ah, oo ay ku jiraan gorgortanka dhinacyada iska caabinta iyo qareennada iyo dacwadaha dhammaan heerarka ka hor maxkamadaha gobolka iyo federaalka iyo hay'adaha maamulka.
Bixinta u doodid toos ah oo ka hadleysa dhibaatooyinka nidaamka, oo ay ku jiraan dacwadaha, iyo sidoo kale sharci dejinta ama u doodista maamulka, sida ugu habboon.
Kaqeybgalka barnaamijka howl-wadeenada ama gobolka oo dhan iyo / ama kooxaha shaqada ee diirada saarey meelaha gaarka ah ee sharciga.
Ka qayb qaadashada waxbarashada sharciga ee bulshada.
La shaqeynta kooxaha bulshada iyo wakaaladaha adeegga bulshada si wax looga qabto baahiyaha macmiilka loona ilaaliyo xuquuqdooda sharci.
Waxaad heli doontaa taageero tayo leh iyo tababar.
Bixinta adeegyo sharci oo tayo sare leh waxay ka bilaabataa u doodayaal xirfad sare leh. Waxaad khibrad kaheli doontaa macaamiisha iyo qolka maxkamadda, markaad horumariso xirfadahan waxaad kormeer kaheli doontaa qareeno khibrad leh iyo Agaasimayaasha Dacwada. Waxa kale oo aad heli doontaa tababar heer sare ah, fursado badan oo tababar ahna waa la heli karaa bil kasta. Qareenada dhawaan la qirey waxay helaan Tababar Xirfadaha Aasaasiga Aasaasiga ah.
Waxaad ka mid noqon doontaa bulshada.
Waxaad sidoo kale heli doontaa faa'iidada inaad u shaqeyso hay'ad leh dhammaan faa'iidooyinka shirkad weyn oo sharci oo leh xiriir dhow iyo deg deg shirkad yar. Waxaad ka mid noqon doontaa koox xul ah oo aad isugu dhow oo xirfadlayaal u heellan oo bixiya adeegyo sharci oo tayo sare leh. Xafiisyadeenu waxay u dhexeeyaan qiyaas ahaan seddex ilaa sideed qareen, oo leh shaqaale taageero fiican. Haddana, xafiisyadeennu midba midka kale wuxuu ku xidhan yahay himilo guud iyo ujeedo jacayl u leh mabaadi'da caddaaladda loo siman yahay.
Aad ayaa laguu qiimeyn doonaa.
Waxaa naga go'an inaan soo jiidanno oo aan hayno xirfadlayaal u heellan sii wadista himiladeenna, waxaanna ku dadaalnaa inaan siino jawi shaqo oo saaxiibtinnimo ku habboon. Waxaan bixinaa xirmo faa'iidooyin gaar ah oo ay ka mid yihiin:
Caymiska Caafimaadka (oo ay ku jiraan faa'iidooyinka ilkaha iyo aragga)
Waqtiga Bixinta Deeqda ah (oo ay ku jiraan fasaxa waalidka)
Barnaamijyada Shaqada ee Kala Duwan (oo ay ku jiraan saacadaha shaqada ee rogrogmi kara, saacadaha shaqada ee saacadaha dhiman ah, iyo wada tashiga)
Xisaabaadka Is-bedbeddeli Kara (oo ay ku jiraan daryeelka caafimaadka iyo kuwa ku tiirsan)
Caymiska Naafanimada Gaaban iyo Muddada-Dheer
403 (b) Qorshaha keydinta howlgabka
Xubinnimada Xirfadlayaasha iyo Taqasusyada Ururka Qareennada
Taageerada Horumarinta Xirfadeed
Fursadaha Shaqada, Galbeedka Galbeedka
Fursadaha Shaqada, Fursad Shaqo
Fursadaha Shaqada, Peoria
Khabiirka Wax-bixinta Sannadlaha ah
Helitaanka Caddaaladda - Qareenka Shaqaalaha
Fursadaha Shaqada, Joliet
Qareenka Shaqaalaha – Mashruuca Helitaanka Caddaaladda (A2J).
Fursadaha Shaqada, Waukegan
Galesburg, Fursadaha Shaqada
U doodaha Bulshada - Cadaaladda, Sinaanta iyo Barnaamijka Fursadaha
Bloomington, Fursadaha Shaqada
Paralegal - Xuquuqda Waayeelka
Qareenka Shaqaalaha Rabshadaha Guriga
Garyaqaanka Shaqaalaha - Adeegyada Dhibbanayaasha Rabshadaha Guriga
Garyaqaanka Shaqaalaha Cadaalada Odayga